ယွန်း: ကျမနှင့် NAIL ART
ကျမနှင့် NAIL ART
မိန်းသလေးသဘာဝ အလှအပကြိုက်ကြတာ သဘာဝပဲမဟုတ်လား။
လှပခြင်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှူကိုရစေတယ်တဲ့ ..စာထဲမှာ ဖတ်ဖူးတာလေးပါ။
တနည်းပြောရရင် အကျည်းတန် မှန်ကြိုက် ဆိုသလိုပေါ့။
ယွန်းတို့ များဖြစ်လိုက်ရင် အသဲအသန်ချည်း။
တလောက အင်တာနက်မှာ nail art
လှချင်တာလဲ ရောဂါတစ်မျိုးပေမို့ 
မိန်းကလေးဆိုတာ ပျိုပျိုအိုအို လှချင်တာချည်းပါပဲ ။
ဘယ်လောက်များ ယွန်းတို့ အလှကြိုက်သလဲဆိုကိုယ်ဝန်ဆောင်တာတောင်မှ
ဗိုက်ဖုံးအကျီ င်္ဘောင်းဘီတွေကို စတိုင်ကျကျ ၀တ်ရမှ ကျေနပ်တာမျိုး။ယွန်းတို့ ဆီမှာ
နေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖွား တိုင်းရင်းသားတွေ ထဲမှာ အမျိုးသမီးအများစုက
အိမ်ထောင်ကျသွားရင် အပျိုဘ၀လို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်မရှိကြတော့ဘူး ။ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်ဆို ပိုဆိုးပါတယ် ။ ဆံပင်က မဖီးမသင် စုတ်တိဆုတ်ဖွား
ဖြစ်သလို ဆွဲထုံး၊ထမီကို ရင်ခေါင်းတက်စည်းပြီး ဖြစ်သလို နေကြတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလှမကြိုက်လို့ အလှမပြင်ရင်တောင်မှ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နေလိုက်ရင်
ကိုယ့်စိတ်လဲ လန်းဆန်းလာတယ် ပိုပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှူ
ဒီလိုမျိုး လက်သည်းပုံ လှလှလေးတွေမြင်ရင် စိတ်ထဲမှာ ယားကျိကျိနဲ့ ။
ကိုယ့်လက်သည်းပြောင်ချောချောလေးကို ကြည့်ရင်း စိတ်နဲ့ အမျိုးမျိုးအလှဆင်
ကြည့်နေမိတယ်။နောက်တနေ့ ကျတော့ ဆိုင်မှာလက်တွေ့ ပြင်ပြီးသား ဖြစ်နေတယ်။ (မြန်တယ်..၂ခါမခေါ်ရဘူး)
တခါပြင်ရင် လက်တစ်ဖက်ကို ၂၅ဒေါ်လာပေးရပါတယ်။ပထမနေ့ တော့ ပြင်ပြီးသား
လက်ကလေးကို ဘာမှ မလုပ်ရက်မကိုင်ရက်နဲ့ ကြော့ကြော့လေးထားလို့
ဒါပေမဲ့အဲဒါလေးကကြာကြာမခံလိုက်ပါဘူး...သိတယ်မှတ်လား။ ကိုယ်ကကလေးအမေဆိုတော့ဒါတွေကြာကြာ ဂရုမစိုက်အားဘူးလေ။
အိမ်အလုပ်လဲ လုပ်ရသေးတာကိုးးး။ ဖြစ်ချင်တော့အမှတ်တမဲ့ ရေပိုက်ခေါင်းကြပ်ကြပ်ကို လှည့်ဖွင့်လိုက်တာလက်သူကြွယ်က လည်သည်းလေးသွားပါလေရောလား။
သွားရုံတင်မကပဲ လက်သည်းထောင့် အသားထဲစိုက်သွားလို့ လက်ကြီးညော်မိပြီး
ယောင်တက်လာတာ ၃ရက်။ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူ့ မှပြောပြရဲဘူး။
နောက်ဆုံးလင်တော်မောင်ကသိသွားလို့ဆေးဆန်းကိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပါသွားရှာတယ်။ ဆရာဝန်ကပြောတာကတော့ အထဲမှာညှော်မိပြီး ပြီတည်လို့ စုပ်ထုတ်ရမတဲ့။
နောက်တပတ်လောက်သာ ဆေးခန်းမလာပဲ ဒီအတိုင်းထားမယ်ဆိုရင် အရိုးကိုထိပြီး လက်ဆစ်ကနေဖြတ်ထုတ်သင့်ရင်ထုတ်ရမတဲ့။ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့
ဘာမှတောင်မပြောနိုင်ဘူး။ဒေါ်လာ ၅၀ အကုန်ခံပြီး ကိုယ့်ရောဂါကိုယ် ရှာယူတဲ့
ကျမကို လင်တော်မောင်က မှတ်ပလားဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်လို့ ။
အဲဒီလိုနာမှ သဘောပေါက်လာတယ် ။
မျက်လုံးထဲမှာ လက်တုံးတိလေးကို ပြေးမြင်ယောင်ပြီး ကြောချမ်းနေမိတယ်။
ခုတော့ လက်သည်းလှလှလေးတွေကြားမှာ ပတ်တီးဖွေးဖွေးလေးက နေရာယူလို့ 
စာရေးသူ ယွန်း မှ 12:43 AM
အမျိုးအစား ဘ၀ရဲ့ တစိတ်တပိုင်း
တော်သေးတာပေါ့ လက်သည်းခွန်ကြီး မကျွတ်သွားတာ..။
ကော်နဲ့ကတ်တာ မို့လား ယွန်းရဲ့။
သက်သာ သွားပြီလား ယွန်းရေ..။
March 13, 2010 at 4:29 AM
မယွန်းရေ...အင်ကြင်းလည်း အဲဒီ nail art ကိုဒီရက်ပိုင်းမှာ တော်တော်စိတ်ဝင်စားလို့သွားလုပ်မလို့လုပ်နေတာ...
လှချင်တာဆိုတော့လည်း ခက်သားလား...မယွန်းရော သက်သာရဲ့လား...
March 13, 2010 at 10:49 AM
ဟိ မမကလဲဖြစ်လိုက်ရင် အသည်းနဲ့အသန်ချည်းပဲ ဟိဟိ အရင်တုံးကတော့ သမီးလဲ လက်သည်းရှည်ထားတယ် အခုတော့မထားဖြစ်တာ ကြာပေါ့ ထားမယ်လုပ်လိုက် ချေးတွေဝင်လာလို့ ရွံတာနဲ့ ပြန်ညှပ်ပစ်လိုက်နဲ့ အခု တပတ်ဆို ၂ ခါလောက် လက်သည်းညှပ်နေပြီ ဟဲဟဲ
March 13, 2010 at 3:13 PM
အမကတော့ အဲဒါမျိုး ငေးရုံပဲ ငေးနိူင်တယ် လက်သည်းရှည်ရင်ကို မနေတတ်တာ၊ အမြဲတမ်း တုံးတိပဲ...:))
March 14, 2010 at 8:08 AM
ဟားဟား...ယွန်းကတော့ဖြစ်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလက်သည်းတုတက်ပြီးရင်ပြန်ချွတ်တာ တော်တော်နာတယ်။
March 16, 2010 at 1:51 AM
March 17, 2010 at 1:57 AM
လှတာက လှသားဗျ အဟိ
March 18, 2010 at 10:09 PM
အင်း သတိထား အမရေ လက်ထိပ်ခြေထိပ် ဂရုစိုက်ရတယ်ဗျ
July 12, 2010 at 11:32 AM
၀တ္ထုတို (14) ကဗျာလိုလို (16) ကျမကြိုက်သောကဗျာများ (6) ခံစားချက် (13) တဂ့်ပို့ စ် (5) ဓာတ်ပုံ (15) ဘ၀ရဲ့ တစိတ်တပိုင်း (5) ဘာရယ်ဟုတ်ဘူး (19) ဘာသာပြန် (7) ရပ်ကွက်ထဲမှာဗျာ (3) ရသ (10) သုတ (13) ဟာသ (7) အက်ဆေး (2) အမှတ်တရ (14) အမိမြေ၏ နေ့ ကြီးရက်ကြီးများ (4) ပေါ့ပေ့ါပါးပါး (20) မေမေ (6)
သင့်အတွက် ခဏတာ ပျော်ရွင်စရာများ
စည်းကမ်းရှိသော နိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော စာများ
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ခင်ခင်မင်မင်
Facebook Account Hacking - Facebook Account Hack ဖို့ ဘယျလောကျလှယျလဲ ဆိုတာ ဒီအောကျက link လေးကို သာ နှိပျပွီး ကွညျ့လိုကျပါတော့ ဥပမာ အနနေဲ့ လုပျပွပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ or Click here. ...
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ယောရုဝ နိုင်ငံတော် - ရှေ့က ရောက်လာသူကိုရော … နောက်မှ ရောက်လာသူကိုပါ ယမမင်းက မေးတယ် … “ ကဲ … ပြောပါဦး … မင်းတို့ကို ရူးသွားစေလောက်တဲ့ အရာက … ဘာလဲ ? ” နှစ်ယောက်လုံးက တပြိုင်တ...
ဒီမှာ “ ဟေ့ လူ” - *ဒီမှာ “ ဟေ့ လူ”* * ခင်ဗျားလည်း မြန်မာ ကျွန်တော်လည်းမြန်မာ* * ယဉ်အောင်ပြောလည်း “ ...
အကျော်အခွဇယား (၂) - တစ်နေ့သော ညနေခင်းတွင် သူငယ်ချင်းလေးယောက် ကျွန်တော့်အိမ်တွင်စုမိကြလေသည်။ ထိုသူလေးယောက်မှာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပေါင်းလာခဲ့ကြသော ငယ်သူငယ်ချင်းများဖြစ်သည့် ဆူးလေဖိုးသ...
အရှိ ... ... ... - ပခုံးစွန်းမှ လည်တိုင်းရင်းတို့ သူ့ခေါင်းလေးထိုးဝင်လာသည်ကို အလိုက်သင့်ပင်ခံယူလိုက်ပါသည်။ ဆံပင်လေးတွေက အလုံးခပ်သေးသေး ချောချောမွေ့မွေ့ရှိမှန်း အထိအတွေ့က သိနေ...